२ दिनमा कति कमायो ‘छक्का पज्जा ३’ले ?? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
२ दिनमा कति कमायो ‘छक्का पज्जा ३’ले ??
यस बर्ष नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा देखिएको कमजोर ब्यापारलाई छक्का पञ्जा ३ ले निकै ठुलो राहत दिएको छ । दशैको छेको पारेर रिलिज भएको यस फिल्मलाई दर्शकहरुले उल्लेखनिय साथ दिईरहेका छन् । छक्का पञ्जाको ब्राण्ड , कमेडी , टे«लर र गीतहरुको लोकप्रियताको कारण पनि दर्शकहरुले यसलाई भरपुर्ण साथ दिएका छन् भने यस पटक अधिकांश दर्शकहरुले फिल्मको कथाबस्तुलाई पनि निकै रुचाएका छन् ।
यतिमात्र होईन फिल्मले सार्वजनिक बिदा नहुँदा पनि बम्पर कलेक्सन गरेको छ । जुन कलेक्सनलाई फिल्मी पण्डितहरुले उत्साहजनक भनेका छन् । पहिलो दिन १ करोड ३० लाख कलेक्सन गरेको फिल्मले दोस्रो दिन भने ८० लाख ग्रेस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ । यसरी हेर्दा फिल्मले दुई दिनमा २ करोड ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।
देशभरका अधिकांश सिंगल स्कृनमा वर्चश्व र मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक सोज पाएका कारण फिल्मको इनिसियल बक्सअफिस बम्पर भएको हो मल्टिप्लेक्सको कलेक्सन फिल्मको निकै राम्रो छ । दशैको बेला दर्शकहरु घर जान हतार हुने भएकाले पनि अपेक्षाकृत अनुसार अझै आउँन सकेको छैन तथापी फिल्मले फुलपातीबाट दर्शकहरु बढ्ने निर्माण टिम बताउँछन् । त्यसोत फिल्मको माउथ पब्लिसिटी पनि निकै राम्रो छ यसको फाईदा पनि पक्कै लिनेछ ।
राजधानीसंगै बिस्तारै मोफसलमा पनि फिल्मको कलेक्सन बढ्ने तरखरमा छ । दीपा श्री निरौलाले निर्देशन गरेको फिल्ममा दिपकसंगै दीपिका प्रसाईँ, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ, स्वस्तिमा खड्का, प्रियंका कार्की, बर्षा राउत, संजोग कोइराला , शिवहरि पौडेल, विल्सन विक्रम राई, निर शाह, यमन श्रेष्ठ, किरण केसी, शारदा गिरी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।फिल्मको कथा दिपक स्वंयमले लेखेका हुन् ।
Chakka Panja 3Deepak Raj Giri